तपाईंको पाल्तु जनावर संग यात्रा को लागि शीर्ष सुझाव | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > तपाईंको पाल्तु जनावर संग यात्रा को लागि शीर्ष सुझाव
आफ्नो पाल्तु जनावर संग यात्रा को लागि यी शीर्ष सुझाव तपाईंको फिक्री सुख मद्दत. किनभने सामना गरौं, यात्रा आफ्नो पाल्तु जनावर संग तनावपूर्ण छ! तर के थप तनावपूर्ण छ, तपाईंको छोड्ने सोच हो जनावर घरमा वा अरूको हेरचाहमा. स्पष्ट रूपमा, तपाइँले गर्ने तरिका कसैले पनि तिनीहरूलाई हेर्दैन! दायाँ?
त्यहाँ के को लागि धेरै विकल्प हो तपाईं घर देखि टाढा यात्रा गर्दै गर्दा. कुकुर होटल, एक केयर टेकर राख्दै, वा बोझ ट्रान्सफर गर्दै, एक प्यारा एक albeit, आफ्नो मित्र छनौट हुन्. यी सबैभन्दा मानिसहरूलाई Resort कि सामान्य. तथापि, कहिलेकाहीं कुनै अन्य विकल्प छैन र तपाईं आफ्नो पाल्तु जनावर संग यात्रा. जबकि यो एकदम गाह्रो प्रक्रिया हुन सक्छ, सेव एक ट्रेन तपाईं पाल्तु जनावर संग यात्रा गर्दा तपाईंलाई मदत गर्नेछ केही शीर्ष सुझाव छ!
पाल्तु जनावर सुझाव 1: एक व्यवहार ल्याउन!
नयाँ ठाउँ गर्न सक्छन् यात्रा र शायद आफ्नो पाल्तु जनावर लागि तनावपूर्ण हुनेछ. त्यसैले उहाँले सकेसम्म तनावमुक्त रहन्छ कि पक्का संलग्न सबैका लागि सहज यात्रा गर्न महत्वपूर्ण छ. उनको नियमित खेलौनाहरू ल्याउँछन्, कंबल, र अन्य आईटमहरू जसले तपाईंको कुकुर वा बिरालालाई सहज बनाउँदछ. तिनीहरूले शान्त थिए र केहि गलत गरेन? तपाईंले तिनीहरूलाई इनाम निश्चित पाल्तु जनावर भविष्यमा थप सहज संग यात्रा गर्न बनाउन.
पाल्तु जनावर सुझाव 2: तर होइन धेरै धेरै व्यवहार…
जस्तै यो स्पष्ट छ म महसुस, तर म जसरी तपाईं को लागि यसलाई हिज्जे गर्न जाँदैछु! तिनीहरूलाई दिन छैन भारी भोजन वा आफ्नो पाल्तु जनावर एक अप्ठ्यारो स्थान मा नै राहत चाहनाको हुनेछ भनेर तिनीहरूलाई धेरै पानी पिउन गरौं! (हामी यात्रा आफ्नो पाल्तु जनावर संग मुश्किल हुन सक्छ कि चेतावनी दिनुभयो!)
पाल्तु जनावर सुझाव 3: व्यायाम
चाहे तपाईं यसलाई रुचि वा, तपाईका घरपालुवा जनावरहरूसँग यात्राका लागि यी शीर्ष सल्लाहहरू मतलब तपाईले व्यायामको कुनै प्रकार गर्नु पर्छ! बस अघि तपाईं यात्रा सुरु, केही जोडदार व्यायाम लागि उनलाई लिन! किनभने अतिरिक्त लामो पैदल वा आफ्नो प्रिय फ्लफी साथीसँग एउटा तीव्र Playtime को, उसले कुराहरू चिन्ता गर्न अझै पनि थकित हुन सक्छ. तपाईं एउटा रन लागि लिइएको भइरहेको यति रुचाउनु एक बिरालो मिल्यो भने, तिनीहरूलाई भित्र प्रोत्साहित गर्ने प्रयास. मेक-शिफ्ट खेलौना उदाहरणको लागि धुलो मोप्सको रूपमा आउन सक्छन्! मलाई विश्वास… म अनुभव पाल्तु जनावर संग यात्रा मा!
पाल्तु जनावर सुझाव 4: अनुसन्धान दूतावास आवश्यकताहरु
विभिन्न देशहरूमा विभिन्न आवश्यकताहरू छ. धेरै देशहरूमा संगरोध अवधि आवश्यक, तपाईं आफ्नो पाल्तु जनावर संग यात्रा समय खर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने त, पक्का यो डबल-जाँच बनाउन! सबैभन्दा देशहरूमा रेबीज लागि शट आवश्यक, bordetella (कुत्ताघर खोकी), र parvo. एक दूतावास कल र आफ्नो अनुसन्धान अनलाइन गर्न देशको आवश्यकताहरू के हेर्न, र गर्दा आफ्नो कागजी कार्रवाई सजिला छ यकीन सीमा पार.
तपाईं घर पालुवा जनावरहरू र देश आवश्यकताहरू सँगै यात्रा अनुसन्धान गर्न सक्नुहुनेछ PetTravel.com.
5. एक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र आवश्यक छन् एयरलाइन्स, सीमा अधिकारीहरु, होटल, पाल्तु जनावर-हेरविचार केन्द्र, र अरूलाई आफ्नो पाल्तु जनावर संग जब यात्रा. धेरै अवस्थामा, जब पाल्तु जनावर संग यात्रा तपाईं भित्र आफ्नो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक 10 तपाईंको यात्रा सुरु को दिन. को विशिष्ट आवश्यकताहरु अनुसन्धान तपाईंको यात्रा यस डाक्टर गएर अघि, त्यसैले तिनीहरू प्रमाणपत्र मा आवश्यक सबै समावेश गर्न सक्नुहुन्छ.
6. तपाईंको पत्रु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र एउटा इलेक्ट्रनिक प्रतिलिपि राख्न
धेरै होटल, यात्रा संचालक, हेरविचार केन्द्र pet, एयरलाइन्स, र भन्सार र अध्यागमन एजेन्सीहरू आफ्नो पाल्तु जनावर पशु प्रमाणपत्र को छापिएको रेकर्ड आवश्यक. बरु हरेक सम्भव उदाहरणका लागि प्रतिहरू को reams बन्द मुद्रण को, एक जोडी बन्द छाप्न र जब पाल्तु जनावर संग यात्रा एक इलेक्ट्रोनिक प्रतिलिपि राख्न.
Myscha Theriault उनको विज्ञान पत्रकार पति र विशाल लैब्राडोर संग पूर्ण-समय यात्रा गर्ने सबै भन्दा राम्रो-बिक्री लेखक र अन्तर्राष्ट्रीय-सिन्डिकेट यात्रा स्तंभकार छ. संग सजिला उनको विद्युतीय प्रतिलिपि, आवश्यकताअनुसार त्यो सधैं उनको कुकुर स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उत्पादन तयार.
“आवश्यक होटल गरेको व्यापार केन्द्र मुद्रक मलाई हाम्रो लैब्राडोर गरेको शट रेकर्ड PDF को प्रतिलिपि छाप्न अनुमति दिन्छ, उदाहरणका लागि हामी सडक बाट उनको लागि Daycare एक दिउँसो बुक गर्न आवश्यक जब. यो तल दिनको दिन कागज अव्यवस्था राख्छ, बाँकी अन्तिम मिनेट लागि तयार गर्दा हाम्रो तालिका परिवर्तन.”
7. अनुसन्धान स्थानीय vets
बस मामला मा कुरा बाटोमा, तपाईं एक सम्मानित डाक्टर फेला पार्न scrambling हुन चाहँदैनन्. तपाईं भ्रमण गरिरहनु भएको क्षेत्रमा केही vets लागि सम्पर्क जानकारी रेकर्ड तपाईं पाल्तु जनावर संग यात्रा सुरु गर्नु अघि.
हामी आशा आफ्नो पाल्तु जनावर संग यात्रा को लागि यी शीर्ष सुझाव तपाईंको नसाहरू एक बिट eased छ! तपाईं साझेदारी गर्न कुनै पनि अन्य शीर्ष सुझाव छ भने हामीलाई थाहा दिनुहोस् एक ट्रेन सेव र हाम्रो समुदाय. हामी तपाईंबाट सुन्न चाहन्छौं!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “तपाईंको पाल्तु जनावर संग यात्रा को लागि शीर्ष सुझाव” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-traveling-with-your-pets%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#animallover #जनावर #बिरालोहरु #कुकुर #पाल्तु जनावर #pettips #travelingpets #travelwithpets europetravel trainjourney